Tantaran’i Indonezia: Nandroso ny Asan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Vavolombelona mitory eny an-tsena, eto Jakarta
Velon-taraina ireo lohandohany tao amin’ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina rehefa henony hoe tsy voarara intsony ny Vavolombelon’i Jehovah. Mpitondra fivavahana sy mpitarika 700 mahery avy amin’ny fiangonana protestanta fito no nanao seminera teto Jakarta, ary nampirisika ny fitondrana mba hamerina an’ilay fandrarana. Tsy nanaiky anefa ny fitondrana.
Niely eran’i Indonezia hoe tsy voarara intsony ny Vavolombelona. Maro àry ny olona liana nanoratra tatỳ amin’ny sampana ary nangataka boky sy gazety na hampianarina Baiboly. Nisy 42 000 mahery ny mpanatrika ny Fahatsiarovana tamin’ny 2003, izany hoe avo roa heny mahery noho ny isan’ny mpitory. Efa ho 10 000 no nanatrika fivoriambe teto Jakarta, ka anisan’izany ny manam-pahefana ambony iray tao amin’ny Minisiteran’ny Raharaha Ara-pivavahana. Gaga izy nahita hoe nijery Baiboly daholo na ny antitra na ny tanora. Nampanantena izy fa hanala ny fanosoram-potaka natao tamin’ny Vavolombelona.
Afaka niverina koa ny misionera rehefa foana ilay fandrarana. Anisan’ny tonga voalohany ry Josef sy Herawati Neuhardt * (avy tao amin’ny Nosy Salomon), Bill sy Nena Perrie (avy tany Japon), Esa sy Wilhelmina Tarhonen, ary Rainer sy Felomena Teichmann (samy avy tany Taïwan). Tonga koa ny misionera vao nahazo diplaoman’i Gileada, ary voatendry hanompo tany Sumatra Avaratra, Kalimantan, Sulawesi Avaratra, ary tany amin’ny faritra mitokana hafa.
“Tena tiako ny nanampy an’ireo mpianatra hahay hampianatra kokoa sy hahay handaha-teny.”—Julianus Benig
Nisy sekoly vaovao roa tao amin’ny biraon’ny sampana tamin’ny 2005. Hoy i Julianus Benig, anisan’ny mpampianatra tamin’ny Sekoly Fampiofanana ho Amin’ny Fanompoana (Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana amin’izao): “Tena tiako ny nanampy an’ireo mpianatra hahay hampianatra kokoa sy hahay handaha-teny ary ho azo ampiasaina kokoa eo anivon’ny fandaminana.” Mpisava lalana manokana na mpiandraikitra ny faritra izao ny ankamaroan’ireo nahazo diplaoma. Maro tamin’ireo rahalahy nanatrika ny kilasy voalohany tamin’ny Sekolin’ny Mpiandraikitra ny Faritra * no niofana ho mpiandraikitra, nandritra ny fandrarana. Nanampy azy ireo hamita tsara ny andraikiny ilay sekoly vaovao, taorian’ny fandrarana. Hoy i Ponco Pracoyo: ‘Lasa mahay mangoraka sy mahay mandray andraikitra kokoa aho izao. Nampahery ilay sekoly sady nandrisika ahy hanao ny asako.’
Nilaina maika ny Efitrano Fanjakana
Nivory tany an-tranon’olona ny ankamaroan’ny fiangonana, nandritra an’ilay fandrarana naharitra 25 taona. Vitsy ny fiangonana afaka nanorina Efitrano Fanjakana, sady sarotra ny nahazo fahazoan-dalana hanorina. Nitombo haingana anefa ny isan’ny mpitory ka nilaina maika ny efitrano. Natsangana àry ny Biraon’ny Fanorenana Efitrano Fanjakana (antsoina ankehitriny hoe Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana eo An-toerana).
Ireo tao amin’ny Nosy Nias, any Sumatra Avaratra, no nandray soa voalohany tamin’izany. Hoy i Haogo’aro Gea, mpitory efa ela tao amin’ny Fiangonana Gunungsitoli: “Faly be izahay rehefa naheno hoe hahazo efitrano vaovao. Nandefa mpiasa an-tsitrapo fito ny biraon’ny sampana mba hanara-maso an’ilay fanorenana. Vita tamin’ny 2001 ilay efitrano.” Hoy i Faonasökhi Laoli, anisan’ny komitin’ny fanorenana teo an-toerana: “Trano tery kely no nivorianay taloha, dia nambanimbanin’ny olona izahay. Nitombo avo roa heny anefa ny isan’ny mpanatrika rehefa vita ny efitrano, ka lasa 40 teo ho eo. Nitombo 500 isan-jato mahery izany tao anatin’ny herintaona. Ilay efitrano no trano tsara indrindra eo amin’ilay faritra. Hajain’ny olona izao ny Vavolombelon’i Jehovah.”
Efitrano Fanjakana any Bandung
Nanomboka nitady tany hanorenana efitrano ireo rahalahy tao Bandung, tamin’ny 2006. Sambany vao hisy efitrano tao. Hoy i Singap Panjaitan, anisan’ny komitin’ny fanorenana: “Herintaona izahay vao nahita toerana mety tsara. Olona tsy Vavolombelona 60 anefa, fara fahakeliny, no mila manaiky ny hanaovana an’ilay fanorenana vao azo ny fahazoan-dalana hanorina. Olona 76 no nanaiky, anisan’izany ny vehivavy manan-kaja iray, izay nanohitra taloha. Nanao varavarana misokatra izahay rehefa vita ilay efitrano, ary nasainay ny mpiara-monina sy ny ben’ny tanànan’i Bandung. Hoy ilay ben’ny tanàna: ‘Modely ho an’ny fivavahana hafa ity toeram-pivavahana madio sy milamina ity.’” Notokanana tamin’ny 2010 izy io ary nisy rihana iray.
Efitrano Fanjakana 100 mahery no naorina eran’i Indonezia, nanomboka tamin’ny 2001. Mbola maro anefa no ilaina.
^ feh. 3 Ao amin’ny Mifohaza! Febroary 2011 ny tantaram-piainan’i Herawati Neuhardt.
^ feh. 1 Antsoina hoe Sekolin’ny Mpiandraikitra ny Faritra sy ny Vadiny izy io ankehitriny.
Indonezia: Nandroso ny Asa